Porn-ED သွေးယိုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း - အဖြစ်များသောတွဲဖက်မှုတစ်ခု - Porn On Your Brain
porn-သွေးဆောင် ED နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်တော့ပူပန်: တစ်ဘုံတူ့
porn-သွေးဆောင် ED အတွေ့အကြုံနှင့်အတူအခြို့သောယောက်ျားတွေရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ် PMO ရှောင်လအတွင်းတစ်ဦးအမှု၌အပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူ။ ဒါပေမယ့်တခြားယောက်ျားတွေအဘို့, ဇာတ်လမ်းအဲဒီမှာအဆုံးသတ်မထားဘူး။ သောကြောင့် PIED နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အချိန်ကနေအနုတ်လက္ခဏာရည်ညွှန်းအတွေ့အကြုံများ၏အချို့သောယောက်ျားတွေလိင်နှင့် "စွမ်းဆောင်ရည်" အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအများကြီးတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။
ဒီယောက်ျားတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ငါက '' စိုးရိမ်ပူပန်၏သံသရာ '၌ပိတ်မိနေရနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ကြီးကျယ်သောသင်တို့သိကြ၏။
PIED သို့မဟုတ်ပူပန်-သွေးဆောင် ED?
; ဗီဒီယိုများသာ '' ကောင်းသောအစိတ်အပိုင်း '' စောင့်ကြည့်; နှင့်မှမြင့်တက် masturbating စဉ်မျိုးစုံ tabs များမှတစ်ဆင့် switching: ဒီမှာဂုဏ်ထူးသင့်ဦးနှောက်တချို့ဥပမာ (သာအလွန်တိကျတဲ့ porn အသုံးပြုမှုအပြုအမူနှင့်အတူနှိုးဆော်ခြင်းရအေးစက်လျက်ရှိသည်ရှိရာ porn-သွေးဆောင် ED ဖြစ်ပါတယ် ပိုပြီးအစွန်းရောက်အမျိုးအစားများ), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုစိုက်ထူရနိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်။ ဤသည်ရန်ပွဲ-or-ပျံသန်းတုံ့ပြန်မှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်တက် tensing တစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်သို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကအလွန်ခက်ခဲစေသည်။
အဘယ်သို့ငါတစ်ခါတစ်ရံငါ့အစာဖတ်သူများနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရဤ: ယောက်ျားတစ်ယောက်ခဏ Reboot လုပ်သွားသူသည်နောက်တဖန်လိင်အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါကဲ့သို့ခံစားရလျက်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်သူနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်မိမိအယခင်ပညာရေးအတွေ့အကြုံစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်မသေချာမရေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ် - သူတို့ကသူ၏ porn-အသုံးပြုမှုကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းသော်လည်း။ သူမထိဖို့ re-sensitized သူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိပြီးစစ်မှန်သောအမျိုးသမီးတွေကိုသော်လည်းသူနေဆဲအခက်အခဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှိသမျှကို built-တက်စိုးရိမ်စိတ်တစ်ခုစိုက်ထူထိန်းသိမ်းခြင်းရှိပါတယ်။
ငါမကြာသေးမီက 15 ဆုံးဖြတ်နိုင်သောအကြံပေးချက်များအပါအဝင်စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံအကြောင်းရှည်လျားအသေးစိတ်ဆောင်းပါးရေးသားခဲ့သည်။ သင်ဒီမှာဖတ်နိုင်သည်